यति बिहानै जिस्किने मुडमा हो तिमी? मैले लेखेँ।
अब त विवाह पनि गछ्र्यौ होला नि? मैले सोधँे, तिमीले पढाउने कलेजमा थुप्रै प्रोफेसर वा आइएनजिओमा ठूलै हाकिमहरु पनि अनम्यारिड होलान् नि?
उनी छैनन् भनेर कसरी थाहा पायौ?
मैले यसअघि नै उसलाई सोधेको थिएँ, किन तिमी हप्तौसम्म मलाई सम्झन्नौ?
के भो? लामो समयसम्म जवाफ नपाएपछि सोधी, म्याडम आउनु भो?
मैले किन रमितालाई छाडेर सिर्जनासंँग विवाह गरे?
जवाफ मनमा छ तर, आफैंलाई दिन डराउँछु। तर, यथार्थवाट कतिदिन भाग्न सकिन्छ र?
आफ्नै वलवुतामा जीवन परिवर्तन गर्न सकिदोरहेछ त। मैले किन छोटो वाटो अपनाएँ होला?
एउटा कुरा भनौ?
अनि तिम्री पत्नी?
मलाई निहालेर हेरी। सोधी, तिमी के सुन्न चाहन्छौ?
साँच्ची, रमिताको जीन्दगीमा कोही आयो कि आएन होला?
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १७, २०७५, ११:३३:००